Xildhibaan Cabdi Cali “Wasiirkii isticmaala lacag aan miisaaniyadda ku jirin waa tuug” – Kalfadhi
Xildhibaan Dr Cabdi Cali, ayaa ka hadlay lacagaha miisaaniyadda aan ku jirin ee sida kale loo isticmaalay, wasiirkii isticmaalo lacag aan loo ansixin waa tuug waana in lasoo xiro” ayuu yiri Xildhibaan Dr Cabdi Cali.
Xildhibaan Dr Cabdi Cali, ayaa waydiiyay Guddoonka Golaha Shacab lacago wasaaradda Maaliyadda ay sheegtay in uu qaatay Baarlamaanka Soomaaliya “yaa qaatay Guddoomiye noo sheegay lacagta wasaaradda Maaliyadda nagu sheegatay” ayuu yiri Xildhibaan Dr Cabdi Cali.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesoow, ayaa sheegay in lacagtii loogu talagalay qaaraanka iyo Tacsida ee laga jaray Golaha Shacab ka aan meel lagu hayn “Waligeey lacag caafimaad maqaadan lacagta aad bixisaan ma saxiib ayaa ku dhiibtaan lacagtaas” ayuu yiri Xildhibaan Jeesoow.
Hadalkaan ayaa Xildhibaanadaan waxay ka sheegeyn Fadhiga Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya oo wali ka socda Xarunta ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho. Golaha Shacabka ayaa leh dood adag oo ku saabsan Miisaaniyadda dalka maadaama ay maanta Akhrinta 3aad marsiinayaan Xisaab xirka Miisaaniyadda 2017.